iphone 11 ndiyo yaive inotengesa foni pasi rese kusvika parizvino muna2020 uye hapana imwe foni yakasvika pedyo
Kuru Nhau & Ongororo iPhone 11 ndiyo yaive inotengesa foni pasi rese kusvika parizvino muna2020 uye hapana imwe foni yakasvika pedyo
iPhone 11 ndiyo yaive inotengesa foni pasi rese kusvika parizvino muna2020 uye hapana imwe foni yakasvika pedyo
Apple & apos; s iPhone 11 yaive yepasi rose inotengesa foni muhafu yekutanga ye2020, isina imwe modhi inouya kunyange padyo nenhamba dzayo.
Ruzivo urwu runobva kune yekuongorora yakasimba Omdia iyo ichangobva kuburitsa runyorwa rwepamusoro gumi inotengesa foni pasi rose muH1 2020.
Iyo iPhone 11 yakadhura mutengo unodhura kupfuura yayo iPhone 11 Pro nhevedzano, asi inoshandisa yakafanana yakasimba Apple A13 Bionic chip mukati, uye inoratidzira iwo akafanana makuru uye ekupedzisira-akareba makamera sePro akateedzana. Kutengesa kweiyo iPhone 11 modhi kwakasvika pakuburitsa mamirioni makumi manomwe nemanomwe muhafu yekutanga yegore, zvichinyanya kudzokorora kubudirira kweiyo iPhone XR kubva gore rapfuura, asi pamwero mukuru. Munguva imwecheteyo gore rapfuura, iyo iPhone XR yaive mbozhanhare inonyanya kufarirwa pasirese ine 26.9 mamirioni mayuniti akatengeswa, saka iyo iPhone 11 iri rakatonyanya kubudirira
Tarisa uone iyo akanakisa iPhone 11 madhiri pano
kana chete tora iPhone 11 kubva Zvakanakisisa Tenga pano
kana tanga waverenga yedu zvakadzama iPhone 11 ongororo pano
Sezvineiwo, Apple ine maPhones mashanu ari pamusoro gumi anotengeswa zvakanyanya mafoni muhafu yekutanga ye2020. Iyo $ 400 iPhone SE (2020), kunyangwe yakaburitswa mukupera kwaApril, yakakwanisa kutengesa mamirioni emamiriyoni e7,7 pakupera kwaJune, uye yakatarwa panhamba 5. Gore rapfuura & apos; s XR ichiri kutengesa zvakanakisa pamamirioni masere masuniti.
Iyo hombe iPhone 11 Pro Max yaive yakakurumbira kupfuura iyo diki iPhone 11 Pro
Imwe nzwisiso yekuziva ndeyekuti yakakura iPhone 11 Pro Max modhi irikunakidzwa nebudiriro iri nani pane idiki iPhone 11 Pro modhi. Apple yakatengesa mamirioni 7.7 mayuniti eiyo iPhone 11 Pro Max, uye mamirioni 6.7 eiyo madiki iPhone 11 Pro.
Kunze kwekambani yemichero, dzese dzese mafoni ari mune epamusoro gumi runyorwa aive ese mafoni asingadhuri akatengwa mushe pazasi pe $ 300 mamaki.
Kwete Android mureza unotengeswa muhuwandu hwakakwana kuti uite kune gumi epamusoro-akatengeswa mafoni mafoni
Anomhanya Samsung Galaxy A51 raked in 11,4 miriyoni yeyuniti yekutengesa muhafu yekutanga yegore, kunyangwe kana chetatu cheiyo iPhone 11 manhamba ekutengesa.
Redmi nhare neChina chinogadzira foni Xiaomi ndivo vamwe vakatengesa nemazana makuru: iyo Redmi Note 8 yaive nhamba yechitatu mune ino yepamusoro gumi runyorwa nekutengesa kwemamiriyoni gumi nerimwe emayuniti, nepo iri nani zvishoma Redmi Note 8 Pro modhi yakawana mamirioni 10.2 mukutengesa.
yakanakisa iphone 12 pro inobata
xs max vs 12 pro max
Inotyisa Nhema Chishanu chibvumirano chinotora iyo Samsung Galaxy Watch Inoshanda 2 pasi kune mutengo usingakundike
Apple iPhone 5s haina & apos; haigamuchire iyo iOS 11.3 bhatiri hutano maficha
Apple & apos; s 5G iPhone 12, Pro, uye Max kuzivisa chiitiko kunogona kuwira paPrime Day 2020
Widget inokutendera iwe kuteedzera iko kushandiswa kwedata pane yako Verizon yakapihwa zita Android foni
Iwo akanakisa madhiri pane iPhone 8 / Plus pre-odha kuVerizon, AT & T, T-Mobile, Sprint, Best Buy uye Target
Verizon inoratidzira mitengo, mazuva ekuburitsa emidziyo mitsva yeApple
Hangouts eApple ikozvino anotendera iwe kumisikidza tsika kurira uye yekuzivisa manzwi
Une vana here? Heino & maapos ekuvharira mukati me-app kutenga pane Android, iOS uye Windows Runhare